Qofkii ugu horeeyay oo Sacuudi Carabiya ugu dhintay Coronavirus - Worldnews.com
Qofkii ugu horeeyay oo Sacuudi Carabiya ugu dhintay Coronavirus
RIYADH, Saudi Arabia – Sacuudi Carabiya ayaa wuxuu xaqiijiyey in dalkaas uu qofkii ugu horeeyay ugu dhintay caabuqa dilaaga ah ee Coronavirus.
Mohammed Abdelali, wasiirka caafimaadka boqortooyadda, ayaa sheegay in geerida ay habeenimadii ka dhacday magaaladda Madiina.
Ruuxa geeriyooday waxaa lagu tilmaamay qof
RIYADH, Saudi Arabia – Boqolaal kamid ah mas'uuliyiinta Sacuudiga ayaa xabsi loo taxaabay, sidda ay ku warantay warbaahinta caalamka. Xubnaha la xiray ayaa waxaa lagu...
Gareowe Online 2020-03-16
Xoggo laga helay amiiradii la xidhay ee Sacuudi Carabiya iyo hal arrin oo loo ogolaaday
Xoggo laga helay amiiradii la xidhay ee Sacuudi Carabiya iyo hal arrin oo loo ogolaaday Qaar ka tirsan warbaahinada reer Galbeedka ayaa daaha ka qaaday xog cusub oo laga...
Qaran News 2020-03-10
NAIROBI, Kenya – Kenya ayaa diiwaan-gelisay qofkii ugu horeeyay ee u geeriyooday caabuqa dunida faraha kulul ku haya ee Coronavirus. Bukaanka, 66-jir muwaadin ah, ayaa...
Sacuudi Carabiya ayaa joojisay in gebi ahaanba salaaddaha jamaacada lagu tukado gudaha iyo bannaanka labada masjid ee barakaysan ee ku kala yaalla Maka iyo Madiina si loo...
Dawlada Sacuudi Carabiya oo xayiraad hor leh kusoo rogay is-socodka gudaha dalka
Dawlada Sacuudi Carabiya oo xayiraad hor leh kusoo rogay is-socodka gudaha dalka Xukuumadda dalka Sacuudiga ayaa ku dhawaaqday in muddo 14 casho ama labo isbuuc ah xayiraad ay kusoo rogtay is-socodka dalka sababo la xiriira xakameynta cududrka...
Coronavirus: DF Soomaaliya oo hakisay duulimaadyadda gudaha
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqdey in ay "illaa iyo amar dambe" joojisay duulimaadyadda gudaha, iyadoo meesha ka saartey in amarkaan uu ku socdo gobol gaar ah. Cabdullaahi Salaad Oomaar, wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada, ayaa sheegay in go'aankaan cusub uu daaran yahay ka hortaga faafitaan horleh oo xanuunka dilaaga ah ee...
HARGEYSA, Somaliland – Dowladda Jabuuti ayaa lagu waramay in Sabtida maanta ay gabi ahaanba joojisay dhaqdhaqaaqa xuduudka Somaliland. Go'aankaas oo labada dhinac aysan si furan uga hadlin wali ayaa lala xiriiriyey cabsida laga qabo faafitaanka caabuqa dilaaga ah ee Coronavirus. Ganacsato doonayey in ay ka talaabaan sohdinta ayaa warbaahinta maxaliga ah u xaqiijiyey in loo...
MUQDISHO, Soomaaliya – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Isniinta maanta ah waxay xaqiijisay kiiskii ugu horeeyay ee caabuqa Coronavirus. Xukuumadda waxay ka gaabsatay fahfaahinta bukaanka. Fowziya Abiikar Nuur, wasiirka caafimaadka, ayaa warkaas waxay si toos ah kaga sheegtay Telefishinka ku hadla afka dowladda ee SNTV. Saacado kadib xaqiijinta, wasiirka Duulista Hawada,...
Sacuudiga oo ajaanibta ka joojiyay Cumrada
Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa dadka ajaanibta ah ka joojisay Cumrada, xilli uu aad u faafayo xanuunka dilaaga ah ee Corona kaasoo kasoo bilowday dalka Shiinaha. Malaayiin Muslimiin ah ayaa sanadka oo dhan Cumro u tega magaalada barakaysan ee Maka, waxaana ay tirada dadka Cumraysana aad sare ugu kacdaa xilliyada uu soo dhaw yahay Ramadaanka. Xayiraadda ayaa kusoo beegmaysa...
STOCKHOLM, Sweden – Aabe Soomaaliyeed ayaa gudaha waddanka Sweden ugu geeriyooday caabuqa Coronavirus, sidda ay BBC-da kasoo xigatay xubnaha qoyskiisa. Axmed Xaaji Xasan, oo ahaa qof waayeel ah, lagu waramay in xanuunka laga helay maalin kahor inta aan lasoo warin dhimashadiisa. Cabdi, wiil uu dhalay marxuumka kaasoo la hadlay Idaacadda Caweysnimo ee BBC Soomaali, ayaa...